I-WOWOW Isitsha Sokugeza Sokugeza Esibanzi Sendawo Yokugeza, 8 Inch Tall Bathroom Tap with Drain and Hoses
Ikhaya / Amanzi okugeza / Oompompi Bendawo Yokugeza Abasakazekile / WOWOW Igumbi lokugeza leSinki lokugeza lokugeza elisakazekile le-Chrome, 8 Inch Tall Bathroom Tap with Drain and Hoses
Ukusuka ku-4 kuya ku-16 intshi ompompi wokugezela osakazekile ekukhuphukeni kwezimbobo ezi-3, ibanga liyalungiswa kuzidingo zakho zangempela. Ilingana indlu yerenti, i-condo entsha, ifulethi elilodwa, ikhaya lezimoto, i-trailer yokuhamba nokusetshenziswa komndeni. Izibambo eziqondile kumklamo we-ergonomics, usayizi ofanele olungele ukulawula, ukhululekile ukujika. Ungayisebenzisa ngomzamo omncane nje nangendlela elula.
I-PREMIUM Brass BATHROOM FAUCET- - Umzimba omkhulu nesixhumi sompompi omnyama zenziwe ngethusi eliqinile, umsebenzi osindayo noqinile. Ukuhlanganiswa komhlangano wokukhipha umbala we-Pop-up ne-cUPC evunyelwe ukufakwa kokufakwa kufakiwe.
I-TECHNOLOGY YOKUQALA YOKUDALA- - Ukwakhiwa kwe-hose okuyi-Unique "Y" okulula ukufaka kulula nokugcina imali yamapayipi.
I-360 DEGREE SWIVEL WIDEDPREAD FAUCET- - Isibambo esiphindwe kabili, izingcezu ezintathu zedizayini zilungele ukulawula ukushisa kwamanzi. Ukukhweza okungama-3-hole nge-3-inch design design, ibanga liyashintsheka kuzidingo zakho zangempela.
OKUPHOLISIWE CHROME FINISH- - I-Vanity ompompi esiphethweni esifana nesibuko esifana nesibuko, idizayini ephezulu eyingqayizivele yokwakha ukubumba okungakaze kuphelelwe yisikhathi.
Iwaranti, UKUSEKELWA KWAMAKHASIMENDE- - Kunikezwa iwaranti yeminyaka emi-5 nokuxhaswa kwamakhasimende. Imbozwe ukubuya kwezinsuku ezingama-90. Uma unemibuzo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
I-SKU: 2320500C Categories: Amanzi okugeza, Oompompi Bendawo Yokugeza Abasakazekile Tags: Chrome, Kugcwele
Iwaranti yeminyaka engu-5